मेरो बजार वर्षको बजार | Martech Zone
सोमबार, फेब्रुअरी 9, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
केहि महिना अगाडि मलाई सोधिएको थियो यदि म जेम्स कोर्नर द्वारा मार्केटिंगको पूर्णता पढ्न चाहान्छु। मaको शोषक हुँ मार्केटिंग पुस्तक त्यसैले मैले तुरून्त जवाफ दिएँ। म पनि मेरो राय मा सजीलो सजीलो छैन, तपाईं मेरो द्वारा देख्नु हुनेछ सामग्री रिचको समीक्षा.
जेम्स कोन्नरको प्रचारकले जे भए पनि मलाई एक पुस्तक पठायो। 😉
उसले थाहा पाएको हुनुपर्छ कि यो एक विजेता हो! पुस्तक पढिसकेपछि, म यत्ति उत्साहित भए कि मैले पुस्तकहरूको एउटा बक्स अनुरोध गरें र म तिनीहरूलाई अन्य मार्केटिंग ब्लॉगरहरूलाई दिँदै छु। अहिले सम्म, प्रतिक्रिया बिल्कुल एकमत भएको छ - यो मेरो हो वर्षको मार्केटिंग बुक!
जेम्सले गएको हप्ता केहि समय लिएका थिए र मैले उनलाई फोनमा अन्तर्वार्ता लिएँ। उहाँ नरम-बोलक र समयको साथ कृपालु हुनुहुन्थ्यो। म निश्चित छु कि उहाँ पुस्तकको प्रतिक्रियामा अचम्मित हुनुहुन्छ - यो भएको छ जेम्स समूहको प्लेबुक। जेम्स समूह एक ब्रान्ड रणनीति र पूर्ण सेवा मार्केटिंग एजेन्सी हो जुन मिडसाइज व्यवसायहरूलाई बढ्न मद्दतको लागि बनाईएको हो। र बढ्न तिनीहरूसँग 95% सफलता दर र यो मन्दीको बेलामा पीडित एकल ग्राहक पनि होइन।
पुस्तक सिद्धान्त होईन, न त यो एक सोच्ने नेता द्वारा लेखिएको थियो ... जेम्स समूहले methods बर्ष परीक्षण र years वर्ष यी विधिहरू प्रशिक्षण खर्च गरे। जेम्सले भने कि पुस्तक लेख्न सजिलो छ किनकि यो उनीहरूको ग्राहकहरूको साथ हरेक दिन काम गर्ने तरीका हो।
त्यहाँ धेरै कारणहरू थिए जुन मलाई पुस्तक यति धेरै मन पर्थ्यो, सहित:
यो सीईओको लागि हो - सीईओको लागि लिखित हो र यो प्रक्रिया र चालित धेरै कुरा हो!
पुस्तक एक सीईईओको सल्लाहकारबाट कहानीको रूपमा लेखिएको छ, सीईओ जेम्सले वर्षौंको दौडान काम गरेका सयौं व्यापारी नेताहरूको संकलन हो।
प्रत्येक अध्यायमा पाठकका लागि एक सारांश र प्रश्नहरू हुन्छन्, कुनै पनि व्यापारी नेताका लागि व्यावहारिक मार्गनिर्देशन बन्नका लागि र मार्केटिंगको ins सिक्न।
पुस्तक एक सजीलो पढ्न को लागी हो, तर मार्केटिंग को सबै पक्षहरु मा बोल्छ - लोगो र ब्रांड बाट एसईओ र वेब डिजाइन।
पुस्तक पुस्तक विवरण मार्केटिंग लगानी वापसी - मेरो दिल को लागी र प्रिय केहि!
जेम्स कोनर पुस्तकको बारेमा उत्कट छन् - र यसले प्रभावलाई बोल्दछ कि बढ्दो मध्यम आकारको व्यवसायले मन्दीलाई सच्याउन सक्छ:
यदि तपाईं पुस्तकको नि: शुल्क प्रतिलिपि चाहानुहुन्छ भने, मेरो सम्पर्क फाराम मार्फत एक प्रतिलिपि अनुरोध गर्नुहोस् के तपाईं को हुनुहुन्छ भन्ने बारे केहि विवरणहरू सहित, तपाईंको मार्केटिंग ब्लग (आवश्यक) र किन तपाईं एउटा प्रतिलिपि चाहानुहुन्छ। तपाईंले पुस्तक पढे पछि यस बारेमा ब्लग गर्ने वाचा गरे पछि म तपाईंलाई एउटा प्रतिलिपि पठाउने छु। मसँग सीमित प्रतिलिपिहरू मात्र बाँकी छ - त्यसैले यसलाई छिटो गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईं चयनित हुनुहुन्छ भने, म फेरि लेख्छु र ठेगाना पठाउन अनुरोध गर्दछु।
याद नगर्नुहोस्, तपाईं पहिलो4वटा अध्याय डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ मार्केटिंग वेबसाइटको पूर्णताबाट ... र तपाईं पुस्तक the को सेटमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ १ को मूल्यको लागि।
जेम्सलाई विशेष धन्यवाद छ मसँग कुरा गर्न आफ्नो व्यस्त तालिका बाहिर समय को लागी को लागी।
म सहमत छु कि यो एक उत्कृष्ट पुस्तक हो, डग। एक आजीवन सेल्सम्यानको रूपमा, ब्रान्ड मार्केटिंग सधैं मलाई कालो कला देखिन्छ, गोलमाल र रहस्यमा कफन। जेम्स कोन्नरको दृष्टिकोण चरणबद्ध र तार्किक छ। मलाई लाग्दैन कि मैले त्यस्तो व्यावहारिक जानकारी कहिल्यै छोटो व्यापारमा पढेको छु।
हाम्रो मार्केटिंगको VP ले मलाई यो पुस्तक उपहारको रूपमा दियो। गएको हप्ता एनवाईसीको लागि र उडानमा मैले यसलाई पढें। इमान्दारीपूर्वक, मार्केटिंगको पूर्णता पहिलो व्यापार पुस्तक हो जुन मैले "किताब जस्तो" पढें। तपाइँलाई रुचि राख्न त्यहाँ पर्याप्त कहानी छ र यसले केही मूल्यवान पाठहरू सिक्नमा मूर्खता देखायो। राम्रो सामान।